Cabanga uhleli phansi ukujabulela ikhofi yakho ekuseni phakathi wendabuko izakhiwo Italian ngesikhathi kubhekwa nganoma elikhazimulayo amanzi okwesibhakabhaka nezintaba luscious green. Nakuba lokhu kungase kuzwakale njengesethulo nje iphupho, kuyinto engokoqobo kulabo abavakashela iLake Como emangalisayo. Lokhu emangalisa uya khona ihlala ohlwini isifiso lezihambi eziningi. Yenze ngisho isendleleni ungene esibukweni yesiliva Hollywood hits nama-movie angaphandle! Lake Como itholakala ntshonalanga ye-Italy, kwesokudla eduze Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland. Ogudle ugu lwalokhu isimanga semvelo esihle kakhulu amadolobha amaningi azokumangaza nakanjani. Nokho, ukukha yibaphi ukuvakashelwa kungaba umsebenzi onzima uma kwi nesimiso tight. Uma dlala iDemo ngesikhathi futhi bafuna ukwenza okuningi yakho uhambo, nazi 5 amadolobha olunothile ukuvakashelwa eLake Como.
Nakuba ezinye izivakashi cabanga Como isicupho izivakashi, bavame ukungabunaki ubuhle bokuqala balokhu idolobha lasendulo. Ungakwazi ukuchitha kuthathe isonto lonke, ukuhlola Como futhi usathola izinto kungagxilisa kithi ukumesaba. Empeleni, eziningi izivakashi ukuthandana nalo edolobheni ukuthi uthathe isikhathi ukuba udabule leli dolobha. Kungahle kube khona eziningi amathilomu nezindawo zokudlela okuhloswe ngaso ukuthutheleka kwezivakashi. Nokho, kukhona amagugu afihliwe. Izindawo ezifana usilika Museum, le 15lombhishobhi ekhulwini th-, le Porta ePitoli, futhi isikhungo medieval silindele imiphefumulo entsha ngaphezulu.
On the ogwini olungasempumalanga lweLake Como amanga Varenna. Njengoba kungenzeka ukuqhathanisa ngosayizi ukuba emadolobheni amakhudlwana, kusenzima indawo uyisidingo ukuvakashelwa. Leli siko Italian nokudoba umzana olunothile uyisidingo ukubona noma ubani ofuna ukuthola kude umsindo befuna enkulu ekuphileni idolobha. Kubonakala sengathi isikhathi kuba sengathi simile njengoba uhlezi echwebeni futhi ngigqolozele blue amanzi ezintabeni phezulu. Uma uthatha konke, sizungeze ukuzwa izindlela cobbled, olunothile amasonto, kanye Villas okumangalisayo Varenna. Qinisekisa ukuthi uphawu Villa Monastero ku amasayithi wakho ukubona. It is hhayi njalo ukuvula emphakathini, kodwa uma wena lucky, uzobona imidwebo engokwesiko yase-Italiya kanye nezinto zangaphakathi ze-villa. Thatha uhambo ngokusebenzisa izingadi eside futhi mncane egcwele flora exotic ngenkathi ulunguza echibini.
On the amabhange esentshonalanga Lake Como, ungavakashela idolobha elihle Menaggio. Menaggio kuyinto edolobheni elikhulu ukuthi kukhanga abaningi ngoba imibono yayo emangalisa kanye izakhiwo amahle. Ingxube ezungezile ubuhle bemvelo imisindvo ne-bendabuko edolobheni Italy. Idolobhana has a lot of izakhiwo ukuthi bahlehlela emuva ekhulwini le-19. Piazza Garibaldi elibalulekile emaphakathi ukuhlangana yazo zonke bendawo nezivakashi. Kunenqwaba yamathilomu nezindawo zokudlela eziveza injabulo nempilo. Menaggio futhi kumelwe-ukuvakashelwa abathandi umlando. Idolobhana esadlala indima ebalulekile wokuQala nowesiBili Umhlaba Izimpi. Namuhla, izinkambo eziningi zingakusa ezindaweni ezinhle ezizungezile endaweni.
Uma ufuna ukuzwa Lake Como kanye nazo zonke ukunethezeka esthetics ehhotela grand, ke vakashela Tremezzo. Tremezzo Iyidolobhana ukuthi selamukele ukuthandwa kwechibi futhi uye wanquma ukwakha engavamile futhi zikanokusho izivakashi. Naphezu dukane yayo kude ukubukeka zendabuko ezingaphezu nokuzwakala, Tremezzo namanje idolobha elihle kakhulu ukuvakashelwa. Akuve eduze Bellagio futhi kuyinto stop eziningi ufuna ukubona endaweni ethule elisenezingane ezinye buzz kuso. Ngenkathi amahhotela kanye Villas edolobheni ukushayela eziningi izivakashi, edolobheni usenayo nezindawo emangalisayo. The Church of St. Maria, Ngokwesibonelo, enhle iyathandwa ngenxa esifanekisweni yayo Amazing Madonna Nera. Ngaphandle kwalokho, bangu izingadi ezithandekayo zokuhambahamba futhi ujabulele izinto nemisindo yeLake Como.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Picturesque Amadolobha Ukuze Vakashela On Lake Como” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fpicturesque-towns-lake-como%2F%3Flang%3Dzu – (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#ILakeComo comolake europetravel i-eurotrip italytravel amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelitaly